မိန်းမချင်းအကြောင်းသိနေပင်မဲ့ဒီအကြောင်းကို ကိုယ့်ရည်းစားနားလည်အောင်ရှင်းမပြတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးကြုံဖူးလား – Trend.com.mm
Posted on October 8, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့သောမိန်းကလေးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ယောက်ျာ်းလေးတွေ မိန်းကလေးတွေအပေါ်ထင်တဲ့အထင်ကတစ်မျိုး မိန်းကလေးချင်းနားလိုက်လိုက်တာကတစ်မျိုး ဒီလိုမတူညီတဲ့အယူဆတွေကြားတစ်ခါတစ်ရံ ကတောက်ကဆနဲ့သ၀န်တိုစရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မိန်းကလေးတွေကကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်ခြားမိန်းကလေးဆက်ဆံတဲ့ပုံကြည့်ပြီးရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံတာလား၊ စကားပြောပုံကိုနားထောင်ပြီး ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဆင်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုတောင်ရေလာမြောင်းပေးတွေလုပ်နေတာလဲ အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ဘယ်လိုစနိုက်ကြော်ဖို့အကွက်ရွေ့နေတာလဲခန့်မှန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကမြွေမြွေချင်းခြေမြင်နေကြပင်မဲ့ ယောကျာ်းလေတွေကတော့သူတို့ချစ်သူသ၀န်တိုပြီးထင်ချင်ရာထင်နေတာ ၊ တစ်ဖက်မိန်းကလေးက ရိုးရိုးသားသားပါလို့ တော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေကတွေးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မိန်းကလေးကသိသိသာသာမပြမချင်းယောက်ျားလေးတော်တော်များများမမြင်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါကိုမြင်တဲ့ကိုယ့်ကောင်မလေးကပြောရင်လည်း နေရာတကာသ၀န်ကြောင်တယ်၊ စွပ်စွဲတယ်သမုတ်တယ် ဘာညာတွေးတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေခံစားလာရတဲ့အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရန်ဖြစ်မနေပဲ ကိုယ်နားလည်သလိုသူနားလည်အောင်မိန်းကလေးဘက်ကလည်းရှင်းပြပေးဖို့လိုသလို ကိုယ့်မိန်းကလေးစိတ်ရှင်းပြီးပူပန်မှုကင်းအောင် ကောင်လေးတွေဘက်ကလည်းနားလည်မှုအပြည့်နဲ့အနေထိုင်ဆင်ခြင်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကရိုးသားကြောင်းဘယ်လို မြူပါစေ မပါသွားကြောင်း ခပ်ရှင်းရှင်းနေပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ RS တွေရန်ဖြစ်ကြတယ် စကားများကြတယ် ကွဲကွာကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ အဓိကလိုအပ်နေတာ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့နားလည်မှုပါ။ ဒီနှစ်ခုကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ရန်ဖြစ်လည်းခဏ ၊ ကွဲကွာလည်းခဏ ပါပဲ …အားလုံးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
Love, cheating, date, relationship. woman drink mojito cocktail with man. Man vaping hookah pipe with girlfriend in bar. Friends at shisha cafe lounge. Bad habits, party, addiction.
တဈခြို့သောမိနျးကလေးတှကွေုံတှရေ့တဲ့ပွဿနာတဈခုပါပဲ။ ယောကျြာျးလေးတှေ မိနျးကလေးတှအေပျေါထငျတဲ့အထငျကတဈမြိုး မိနျးကလေးခငျြးနားလိုကျလိုကျတာကတဈမြိုး ဒီလိုမတူညီတဲ့အယူဆတှကွေားတဈခါတဈရံ ကတောကျကဆနဲ့သဝနျတိုစရာတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ မိနျးကလေးတှကေကိုယျ့ခဈြသူကို တဈခွားမိနျးကလေးဆကျဆံတဲ့ပုံကွညျ့ပွီးရိုးရိုးသားသားဆကျဆံတာလား၊ စကားပွောပုံကိုနားထောငျပွီး ဘယျလိုလမျးကွောငျးဆငျနတောလဲ၊ ဘယျလိုတောငျရလောမွောငျးပေးတှလေုပျနတောလဲ အခုခတျေစကားနဲ့ပွောရရငျ ဘယျလိုစနိုကျကွျောဖို့အကှကျရှနေ့တောလဲခနျ့မှနျးတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုမိနျးကလေးတှကေမွှမွှေခေငျြးခွမွေငျနကွေပငျမဲ့ ယောကျြားလတှေကေတော့သူတို့ခဈြသူသဝနျတိုပွီးထငျခငျြရာထငျနတော ၊ တဈဖကျမိနျးကလေးက ရိုးရိုးသားသားပါလို့ တျောတျောမြားမြားယောကျြားလေးတှကေတှေးတတျကွပါတယျ။ တဈဖကျမိနျးကလေးကသိသိသာသာမပွမခငျြးယောကျြားလေးတျောတျောမြားမြားမမွငျတတျကွပါဘူး။ ဒါကိုမွငျတဲ့ကိုယျ့ကောငျမလေးကပွောရငျလညျး နရောတကာသဝနျကွောငျတယျ၊ စှပျစှဲတယျသမုတျတယျ ဘာညာတှေးတတျကွပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒီလိုကိစ်စတှခေံစားလာရတဲ့အခါ နှဈဦးနှဈဖကျရနျဖွဈမနပေဲ ကိုယျနားလညျသလိုသူနားလညျအောငျမိနျးကလေးဘကျကလညျးရှငျးပွပေးဖို့လိုသလို ကိုယျ့မိနျးကလေးစိတျရှငျးပွီးပူပနျမှုကငျးအောငျ ကောငျလေးတှဘေကျကလညျးနားလညျမှုအပွညျ့နဲ့အနထေိုငျဆငျခွငျပွီးကိုယျ့ဘကျကရိုးသားကွောငျးဘယျလို မွူပါစေ မပါသှားကွောငျး ခပျရှငျးရှငျးနပွေဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ တကယျတော့ RS တှရေနျဖွဈကွတယျ စကားမြားကွတယျ ကှဲကှာကွတယျဆိုတဲ့နရောတှမှော အဓိကလိုအပျနတော စဈမှနျတဲ့မတ်ေတာနဲ့နားလညျမှုပါ။ ဒီနှဈခုကိုသာ ပိုငျဆိုငျထားမယျဆိုရငျ ရနျဖွဈလညျးခဏ ၊ ကှဲကှာလညျးခဏ ပါပဲ …အားလုံးကိုပွနျလညျတညျဆောကျလို့ရပါတယျ။